News Collection: कहाँ छन् माओवादीका युद्धकालीन स्याटलाइट र वाकीटाकी?
कहाँ छन् माओवादीका युद्धकालीन स्याटलाइट र वाकीटाकी?
काठमाडौ, साउन २५ । एकीकृत नेकपा माओवादीले युद्धकालीन सञ्चारका लागि करोडौँ रकम खर्चेर खरिद गरेका सेटेलाईट फोन र वाकीटाकी मध्ये अधिकांश अहिले उपयोग विहीन र अलपत्र अवस्थामा छन्। युद्धकालमा किनेका ९५ थान सेटेलाईट फोन, एक हजारभन्दा बढी वाकीटाकीको एकीकृत भण्डारण अस्तव्यस्त छ भने विगतमा लडाकुका सबै क्यान्टोन्मेन्ट र एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा लडाकुले प्रयोग गरेका करिब १०० थान वाकीटाकी र आधा दर्जनजति सेटेलाईट फोन के कस्तो अवस्थामा छन्, अहिले कसैसँग कुनै हिसाबकिताब छैन। जनताको सम्पत्ति लुटेको पैसाले माओवादीले खरिद गरेका ती उपकरण र प्रविधि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि राज्यलाई बुझाउनुपर्नेमा नेता तथा पूर्व लडाकुले अवैधरुपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। अहिले पनि कतिपय स्याटलाइट र वाकीटाकी दर्ता विना नै नेता र लडाकुहरुको कमाण्डरकहाँ राखिएको छ। विना दर्ता त्यस्ता फोन चलाउनु सर्वसाधारणका लागि ठूलो अपराध मानिन्छ, तर माओवादीका नेता/कार्यकर्ताले भने अहिलेसम्म छुट पाइरहेका छन्।
माओवादीले २०५८ सालदेखि सेटेलाईट फोन र वाकीटाकीको संजाल विस्तार शुरु गरेको थियो। सरकारले माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरेर प्रतिबन्धित गर्नु केही समय अघि फिलिपिन्समा उत्पादित चार थान सेटेलाईट फोन उसले एयरपोर्टबाट भित्र्याएको थियो। प्रचण्डको प्रयोगका लागि भित्र्याइएका ती फोन र त्यसमा प्रयोग गर्ने केस कार्ड (रिजार्ज कार्डजस्तै) का लागि पाँच लाख रुपैयाँ तिरिएको थियो। प्रचण्डका स्वकीय सचिव विकेश श्रेष्ठले उक्त रकम तिरेका थिए। त्यसो त माओवादीले त्यसअघि पनि एकपटक ल्याएको थियो स्याटलाईट फोन। माओवादीले पहिलोपटक राजधानी भित्र्याएका दुईथान सेटेलाईटका सेट त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरीले फेला पारेर समातेको थियो। त्यतिवेला माओवादी नेता भक्ति पाण्डले रुपन्देहीतिर रहेको आफ्नो खेत बेचेर दुईटा सेट मगाएका थिए, ९० हजार प्रतिगोटामा। तर, रोचक यो थियो कि पहिलोपटक भित्र्याएको सेट चलाउन माअेावादी नेताहरुलाई झण्डै ६ महिना लागेको थियो। 'सेटेलाइट सेट स्ट्याण्डवाई मोडमा चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा जान्न हाम्रा नेतालाई ६ महिनाजति लागेको थियो' प्रचण्डका युद्धकालीन हितैसीले भने। भित्र्याइएका चार सेटमध्ये एउटा प्रचण्डलाई र बाँकी सेट तत्कालीन अवस्थामा माओवादीले गठन गरेको पूर्वी, मध्य र पश्चिम कमाण्ड इन्चार्जहहरुलाई दिइएको थियो। त्यसपछि ल्याइएका सेटहरु बैकक र जापान निर्मित थिए। जापानको थुरायो कम्पनीले निर्माण गरेको सेट चाहिँ फिलिपिन्स र बैंककबाट मगाइएका भन्दा दश हजार रुपैयाँ महंगा थिए। थाइल्याण्ड र फिलिपिन्सका सेट करिब ९० हजार रुपियाँमा माओवादीले खरिद गरेको थियो। थुरायोको कम्पनीको सेटेलाईट फोनबाट शुरुदेखि भूमिगत अवस्थाको अन्तसम्म प्रचण्डले इन्टरनेट चलाएका थिए। फिलिपिन्स र बैककमा बनेका सेट छ वटा नम्बर भएका थिए, जसबाट अहिले नेपाल टेलिकमका प्रिपेड र पोष्टपेड सीम चलाउन सकिन्छ। तर, दश वटा नम्बर भएका थुरायो सेटमा चाहिँ नेपाल टेलिकम वा एनसेलको सीम राखेर चलाउन मिल्दैन।
जानकारहरुका अनुसार युद्धकालको अन्तिमसम्म माओवादीले ९५वटा सेटेलाईट फोन किनेको थियो जसको मासिक खर्च मात्रै ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म हुने गर्थ्यो। आपूर्ति विभाग हेर्ने एक नेताका अनुसार ती फोनबाट नेपाल र भारतमा सम्पर्क गर्दा प्रतिमिनेट करिब असी रुपियाँ लाग्थ्यो भने अरु मुलुकमा अलि सस्तो पर्दथ्यो। तर, त्यही सेटबाट अर्को सेटमा गर्दा प्रतिमिनेट पाँच रुपिया मात्र लाग्थ्यो।
युद्धकालमा प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल, अर्का नेता वामदेव गौतमलगायतलाई महँगो स्याटलाईट फोनबाटै सम्पर्क गर्थे। माओवादी पोलिटव्युरो सदस्य गोपाल किरातीले शान्तिप्रक्रियामा आएको केही समयपछि आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए, '१२ बुँदे सहमति गर्नुअघि सेटेलाईट फोनबाट हाम्रा अध्यक्षले सात दलका नेताहरुलाई फोन गर्दा मात्रै २० लाख भन्दा बढी खर्च भएको छ। हाम्रो लागि १२ बुदे सहमति निकै महँगो पो भयो त।' शान्ति प्रक्रियाको शुरुवातका बेला प्रचण्डसँग फिलिपिन्स र बैंककमा निर्मित एक/एक सेटेलाईट फोन थिए र अहिले पनि छन्।
स्याटलाईट भन्दा पनि माओवादीले युद्धकालमा ठूलो संख्यामा वाकीटाकी सेट भित्र्याएको थियो। माओवादीले 'जनमुक्ति सेना'का सेक्सन कमाण्डरसम्मलाई वाकीटाकीको प्रयोग गर्न दिएको थियो। तर, स्याटलाइट फोन चाहिँ लडाकु (जनमुक्ति सेना)को कम्पनी कमाण्डर सम्मलाई दिइएको एक पूर्व कमाण्डरको भनाई छ।
सानीयो कम्पनीको जापनीज, थाइल्याण्ड र भारतीय ब्राण्डका वाकीटाकी माओवादीले युद्धकालमा सबैभन्दा बेसी प्रयोग गरेको थियो। एक हजारभन्दा बढी ल्याइएका ती वाकीटाकीको मूल्य प्रतिगोटा करिब १० हजार रुपियाँ थियो। तर, वाकीटाकीको एउटा बेस चलाउन मात्रै करिब ५० हजार रुपियाँ पर्थ्यो। वाकीटाकीको एउटा बेसमा भूगोल अनुसार २२ देखि २५ वटासम्म सेटले काम गर्नेगर्थ्यो। तर, वाकीटाकीमा इन्टरकम फोन गरेको पैसा लाग्दैनथ्यो। 'सेटेलाईट जस्तो थिएन वाकीटाकी ' माओवादीका एक पूर्व पोलिटव्युरो सदस्य भन्छन् 'शुरुमा स्थापना गर्न खर्च गर्नुपर्थ्यो, त्यसपछि खर्च हुन्थेन।'
युद्धकालमा भारतबाट भित्र्याउन लागिएका २ सय थान वाकीटाकी सेट र त्यसका करिब २० वटा बेस सिलिगुडीमा पक्राउ परे पछि माओवादी झस्किएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासन काल २०६१ सालतिर सो संख्यामा सेट पक्राउ परेका थिए। नेपालमा पनि सेनाले कहिलेकाहिँ वाकीटाकी जफत गर्थ्यो र त्यो थाहा पाउने वित्तिकै माओवादीले बेस व्लक गरेर सूचना बन्द गर्थे।
माओवादीले युद्धकालमा विस्तार गरेका सेटेलाईट फोन तथा वाकीटाकीको सञ्जाल यति शक्तिशाली थिए कि, राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते चालेको कदम पछि नेपाल टेलिकमका टेलिफोन र मोवाईल बन्द हुँदा पनि माओवादीको सञ्चार संजाल यथावत थियो। माओवादीले तत्कालीन सात राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग र भारतमा रहेको नेतृत्वसँग स्याटलाइट फोनबाटै कुराकानी गर्नेगर्थे। भारतीय दुताबासले दिएको एउटा सेटेलाईट फोन त्यतिवेला नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवासमा थियो, त्यही मार्फत् प्रचण्ड र कोइरालाबीच कुराकानी हुनेगर्थ्यो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि केही स्याटलाईट फोन एमाओवादीले विदेशी गुप्तचर खुफिया एजेन्सीसँग कुराकानीका लागि प्रयोग गर्ने गरेका थिए।
'खरिद गरिएका सेटेलाईट र वाकीटाकी युद्धकालमा जोसँग थिए, त्यो उनीहरुसँगै छ' युद्धकालमा सञ्चार उपकरण र हतियार आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएका एक केन्द्रिय सदस्यले भने, 'अहिले सेटेलाईट फोन भन्दा मोवाईल सस्तो छ, त्यही चलाइएको छ। पहिलाका फोन भण्डारण पनि गरिएको छैन, सरकारलाई बुझाइएको पनि छैन।'
गत २८ चैतमा नेपाली सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिनुअघिसम्म माओवादी लडाकुका सात डिभिजन र बाँकी रहेका सहायक शिविरमा वाकीटाकी फोन प्रयोग हुँदै आएको थियो। युद्धकालीन मात्रै नभएर माओवादीले शान्तिप्रक्रियामा पनि वाकीटाकी खरिद गरेको थियो। माओवादी लडाकुले जीपी ३३९ मोडलका तथा ८० र ४० बेसका भीएचएफ प्रबिधिबाट वाकीटाकी सञ्चालन गरेका थिए।
तर, माओवादीले शान्तिकालमा आउँदा पनि अबैधरुपमा फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेको थियो। लडाकुका केही कमाण्डरले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा फि्रक्वेन्सी किन्नका लागि सरकारलाई आवेदन दिएको तर सरकारले नै मतलब नगरेको तर्क गरे। तर, सञ्चार मन्त्रालयको फि्रक्वेन्सी इजाजत एक इन्जिनियर भने विना इजाजत वाकीटाकी तथा सेेटेलाईट फोन प्रयोग गर्नु कानूनी व्यवस्था विपरित हुने बताउँछन्।
ंंरेडियो ऐन अनुसार प्रतिगोटा वाकीटाकीको पाँचसय शुल्क तिरेर एक बर्षका लागि वाकीटाकी सञ्चालन गर्ने अनुमति सरकारले दिएको छ। तर, सेटेलाइट फोनका लागि भने दूरसञ्चार प्राधिकरणले इजाजत दिने गरेको छ। नेपालीलाई ३० हजार र विदेशीलाई १ लाख २० हजार रुपैयाँमा एक बर्षका लागि सरकारले फ्रिक्वेन्सी दिने गरेको छ। एमाओवादीले युद्धकालमा त अवैधरुपमा स्याटलाइट र वाकीटाकी चलाए नै, शान्तिकालमा पनि विना दर्ता प्रयोग गर्दै आएका छन्। माओवादीको नेतृत्वमा दुईपटक सरकार बने पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न उसले ध्यान दिएको छैन बरु उसले लुकिचोरी चलाइरहेको छ।
कतिसम्म भने दुई बर्ष अघि माओवादी नेता कृष्णवहादुर महराले चिनियाँहरुसँग पचास करोड रुपियाँको डिल स्याटलाइट फोनमार्फत नै गरेका थिए। तर, दुवईमा रहेको स्याटलाइटको हवबाट भारतीयहरुले त्यसको रेकर्ड ल्याएर सार्वजनिक गरिदिएपछि रहस्यको पर्दा खुलेको थियो। माओवादीका अवैध स्याटलाईट र वाकीटाकी सरकारले जफत गर्नुपर्छ भनेर कुनै पनि दलले आवाज नउठाउनु विडम्बनापूर्ण देखिन्छ। अहिले प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, रामवहादुर थापा बादल, बर्षमान पुन अनन्त, कृष्णवहादुर महरा लगायतसँग स्याटलाईट फोन रहेको बुझिएको छ। वाकीटाकी त वाईसीएलले पनि प्रयोग गर्दै आएको थियो। माओवादीले स्याटलाईट फोन लुकाएर राज्यलाई आउने ठूलो राजश्वसमेत छलि गरेको छ।--dristi